Ciraq: “Ciidamada Mareykanka ma haystaan fasax joogitaan” – Hornafrik Media Network
Ciraq: “Ciidamada Mareykanka ma haystaan fasax joogitaan”
By Liibaan Nuur	 On Oct 22, 2019
Bayaanka kasoo baxay Ciraq ayaa burinaya hadalka Pentagon-ka Mareykanka ee ah in ku dhowaadka 1,000 askari ee ka baxay waqooyiga Syria ay degi doonaan galbeedka Ciraq, halkaasi oo ay kasii wadi doonaan dagalka ka dhanka ah Daacish.
“Dhammaan ciidamada Mareykanka ee kasoo baxay Syria, waxaa fasax loo siiyey inay soo galaan gobolka Kurdistan, si ay halkaas ugu nagaadaan inta ay uga sii gudbayaan meel ka baxsan Ciraq. Ma jiro wax fasax ah oo loo siiyey inay si rasmi ah u joogaan Ciraq” ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay, militariga Ciraq.
Ilaa iyo hadda ma cadda haddii ciidamada Mareykanka ay Ciraq ka dhigan doonaan saldhig ay ka qaadaan weeraro ka dhan ah kooxda Daacish ee Syria.
Ciidamada Mareykanka ee shalay gaaray Ciraq, ayaa ku biiraya 5,000 oo askar Mareykan ah oo horey u joogay Ciraq, kuwaasi oo tababara ciidamada Ciraq, kana caawiya in kooxda Daacish aysan dib usoo rogaal celin.
Maxaa looga hadlay kulankii dhex maray Maxamed Mursal iyo James Swan?
Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay hadal ka soo yeeray Safiirka Mareykanka